Manaisotra ny VPN Ao Amin’ny Tranombarotra ao Shina ny Apple · Global Voices teny Malagasy
Manaisotra ny VPN Ao Amin'ny Tranombarotra ao Shina ny Apple
Voadika ny 22 Aogositra 2017 6:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Español, English
Ny filoham-pirenena shinoa Xi Jinping mampiasa iphone. sary avy amin'ilay mpanao sariitatra politika Baiduicao via China digital times.
Iray volana taorian'ny nanambaran’i Shina ny drafitra hanenjehana izay orinasa manome tambajotra virtoaly manokana (VPN), dia nampahafantatra tamin'ny mpanjifany ilay orinasan-teknolojia Apple miorina ao Etazonia fa ho akatony ny servisy VPN ao amin'ny tranombarotra ao Shina ho fanajana ny fitsipika vaovao misy ao amin'io firenena io.
Ny VPN dia fampiasa mamela ny mpisera aterineto hamaky ny sivana amin'ny alalan'ny fananganana zotra tsara afina sy voaaro mankany amin'ny tambajotra iray hafa any amin'ny toerana jeografika iray hafa.
Tamin'ny 29 Jolay 2017, Namoaka filazana avy amin'ny Apple amin'ny hanatsoahana fampiasa VPN ao amin'ny tranombarotra ao Shina ny orinasa ExpressVPN miorina ao Fanjakana Mitambatra “satria ahitana votoaty tsy ara-dalàna ao Shina” izany.
Tsikaritry ny ekipa mpanao fikarohana ao amin'ny orinasa ihany koa fa efa voaisotra avokoa ny VPN lehibe natokana ho an'ny iOS.
Notsikerain'ny orinasa ny Apple tamin'ny “fanomezana vahana ny ezaka fanasivanana ataon'i Shina” izay “mandrahona ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahafahana ara-tsivily.”
We’re disappointed in this development, as it represents the most drastic measure the Chinese government has taken to block the use of VPNs to date, and we are troubled to see Apple aiding China’s censorship efforts. ExpressVPN strongly condemns these measures, which threaten free speech and civil liberties.
Kivy izahay amin'izao fivoaran-draharaha izao, satria izao no dingana lehibe indrindra nataon'ny governemanta shinoa hanakanana ny fampiasana ny VPN hatramin'izay, ary talanjona izahay mahita ny Apple manome vahana ny ezaka fanivanana shinoa. Melohin'ny ExpressVPN amin'ny heriny manontolo izao fepetra izay mandrahona ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahafahana ara-tsivily izao.
Fa raha mbola misokatra kosa ny fampiasa VPN ivelan'i Shina, dia afa-mitroka sy manohy amin'ny fampiasana ny fampiasa ihany ny Shinoa mpanjifa raha voasoratra anarana any amin'ny app stores sy adiresy fandoavana faktiora ivelan'i Shina, araka ny toromarika nolazain'ny orinasa ny kaonty Apple an-dry zareo:
Users in China accessing a different territory’s App Store (i.e. they have indicated their billing address to be outside of China) are not impacted; they can download the iOS app and continue to receive updates as before
Tsy tratran'izao kosa ny mpisera ao Shina miditra amin'ny App Store any amin'ny sisintany hafa (i.e. nanondro adiresy fandefasana faktiora ivelan'i Shina ry zareo); afa-mitroka ny fampiasa iOS toy nyy teo aloha ihany ry zareo sy manohy amin'ny fahazoana fanavaozana farany.
Ny fanindriana ny VPN dia lazaina ho “fiandrianam-pirenena an'aterineto” Shinoa saingy manakana ny mpiserasera aterineto tsy hiditra amin'ireo tranonkala vahiny bahanan'ny governemanta toy ny Google, Youtube, Facebook, ary Twitter izany. Miantraika any amin'ny fikarohana akademika sy siantifika ihany koa izao fepetra vaovao izao. Nandritra ny antsafa tamin'ny fampitam-baovao ny profesora iray avy ao amin'ny Oniversite Tsinghua izay mampiasa VPN amin'ny fitaovana findainy no nanazava hoe tahaka ny ahoana ny fiantraikan'ny fanesorana ny servisy VPN amin'ny asan'ny mpampianatra mpikaroka.
First-class research at a truly competitive level can’t go on with researchers cut off from the outside world. It’s truly unthinkable.
Tsy afa-mandeha amin'ny fikarohana tapa-pifandraisana amin'ny tontolo ivelan(‘ny firenena) ny fikarohana kilasy-voalohany tena ao anatin'ny dingana fifaninanana. Tsy azo eritreretina mihitsy izany.
Tamin'ny volana janoary lasa teo, nilaza ny Minisiteran'ny Indostiria sy ny Teknolojian-Torohay ao Shina fa handrara ireo “servisy tsy ara-dalàna” izay mitarika amin'ny asa miampita sisintany ry zareo. Horarana ny VPN tsy voasoratra anarana mandra-pahatonga ny Marsa 2018.
Ny fanenjehana misy amin'izao fotoana izao mihatra amin'ny fiseraseran'ny olona tsirairay ny VPN dia heverina ho misy ifandraisany amin'ny kongresy nasionalin'ny Antoko Komonista Shinoa faha-19 izay hotontosaina amin'ny mihintsan-dravina ho avy izao. Misy manko ny tatitra avy amin'ireo sehatra fampitam-baovao ampitan-dranomasina shinoa fa misy adim-pahefana ao amin'ny Komitin'ny Birao Politika Foibe, satria heverina fa ho maro ireo mpikambana no hisotroronono amin'ity taona ity. Tsy tian'ny manampahefana hivoivoy amin'ny tambajotra ao an-toerana ny vaovao politika saropady.
Efa voatsinjo mialoha ihany koa ny fanapahan-kevitry ny Apple. Nanambara ny Apple tamin'ny 12 Jolay 2017 fa hiara-miombon'antoka amin'ny orinasa shinoa iray mpitantana data (lahatahiry) amin'ny fanokafana foiben-tahiry (data center) vaovao ho fanarahana ny Lalànan'ny Fiarovanantserasera Shinoa izay manery ny fitehirizana ny data ao Shina.
Nanoritra ny Apple fa manana rafitra fanafenantsoratra matanjaka manakana ny fahafahan'ny hafa ary anisan'izany ny governemanta hitsofotsofoka amin'ny lahatahirin'ny mpiserasera io foiben-tahiry io. Saingy araka ny lalànan'ny fiarovanantserasera shinoa, dia tsy maintsy manome fanohanana ara-teknika amin'ny fanjakana ny orinasan-teknolojia ho fepetra iadiana amin'ny fampihorohoroana.
Ankoatra izany, manana fahefana ihany koa ny mpampihatra lalàna hitaky ny lahatahirin'ny mpiserasera iray noho ny antony famotorana ady heloka bevava. Raha iverenana ny tamin'ny taona 2005, natolotr'i Yahoo tamin'ny manampahefana ny mombamomba amin'ny antsipiriany an'ilay Shinoa mpanangom-baovao Shi Tao na dia tsy notehirizina tao Shina aza ny data ary afa-nitsipaka ny fangatahana ny orinasa. Nampiasain'ny governemanta ny torohay hiampangana sy hanamelohana ilay mpanao gazety ho mamoaka tsiambaratelom-panjakana. Nandany 8 taona sy enimbolana tany am-ponja ilay mpanao gazety vokatr'izany.
Talohan'ny nanambaran'i Apple n fikasany hanokatra foiben-tahiry ao Shina, dia efa nametraka ny foiben-tahiriny tao Shina niaraka tamin'ny mpiara-miombon'antoka ao an-toerana ho fanarahana ny lalàna shinoa ny goavana hafa toy ny Amazon, IBM ary Microsoft.
Ankoatra ny fanindriana ny VPNs, dia nampihatra fepetra hafa ihany koa ny manampahefana hanakanana ny vahoaka shinoa tsy hifandray amin'ny tontolo ivelany. Lasibatry ny fanakanana ihany koa ny fitaovana famakiana sakana tahaka ny Shadowsocks, fampihatra hanaovana fifandraisana voaafintsoratra mandeha amin'ny lohamilina virtoaly manokana (VPS).
Nitatitra ny Shinoa iray mpiserasera zatra mampiasa Shadowsocks hitsidihana tranonkala vahiny fa tapaka tampoka ny aterinetony tamin'ny 17 jolay. Ny ampitso, niantso azy ny polisin'ny fiarovanantserasera iray hanatrehany famotorana any amin'ny komisariàn'ny polisin'ny distrika, izay nanaovana famotorana azy. Niangaviana izy hanasonia antonta-taratasy (jereo ny sary etsy ambany) manery az tsy hampiasa fitaovana famakiana sakana intsony. Naverina ny aterinetony tamin'ny 18 jolay.
Miahiahy ilay mpiserasera fa ny mpanome tolotra aterineto no nilaza fisian'ny serasera aterineto tsy ara-dalàna, toy ny fantsom-pifandraisana voaafin-tsoratra, tany amin'ny polisin'ny fiarovanantserasera.
1 andro izayAfrika Mainty
Notafihan'ny Fadintseranana Hongkong ny vondrom-barotra pro-demaokrasia iray, teraka ny fanehoam-pitiavana